Ngiqinisekile abaningi bethu baye yezwa Amakholwa Old. kukhulunywa kaningana kubo izincwadi kanye journalism. Mhlawumbe acacile kakhulu indaba cinematic ngazo kuqukethwe nendumezulu yomqondisi Alexander Proshkina "Mikhail Lomonosov", okuyinto ngokucace futhi iqiniso lichaza izenzakalo kahle leyo minyaka. Kodwa wonke umuntu uyazi ukuthi kungani kwakukhona Old Amakholwa, noma, njengoba zibizwa kanjalo, emthethweni? Lingobani leli qembu?
Umsuka walo Amakholwa Old
Kudala, ngo-1650, uMphathi Nikon, ukuphatha ke Russian Church, zanquma ukwenza ushintsho isiko isiko, ezithathwe ngesikhathi eRussia. Injongo yalezi zinguquko - isiko isilinganiso Russian nesiGreki. Lokhu okuqhubekayo, ngokuvamile, izinguquko kuye kwabangela uqhekeko we Russian eBandla futhi wabeka isisekelo sokuba Old Amakholwa imisinga. Isikhubekiso baba ikakhulukazi umehluko emasikweni ayisihluthulelo ephoqelela uphawu lwesiphambano, bese wamukela isiqondiso ukunyakazisa udwendwe nabanye.
Old Amakholwa - umlando nokufel 'ukholo
Akubona bonke Russian ubuKristu yokutholwa lezi ezintsha. Abaningi besiphikisa obala emisha onikezwe nabo abangu beshushiswa. Phakathi kwalabo aqine bavikela oMdala Orthodox ehlonipha, babe-monk Epiphanius Deacon Fedor, uLazarus umpristi avvakum. Babedingiswe ukuba Pustozersk (Arkhangelsk esifundeni). Wonke umuntu ngaphandle izilimi uHabakuki wanqunywa futhi sinqunyiwe ngakwesokunene, ukuze bakwazi ukushumayela noma ngamazwi noma ngokubhala. Long kweminyaka eyishumi nane, babechitha amanye emgodini ongahluziwe, kodwa akazange balahle ukholo lwabo. Ekugcineni, ngo-April 14, 1682 bayiswa endaweni lapho Uhlaka ukuze ziyoshiswa, futhi wabulawa yalungiswa. Bobane ngokuqinile futhi ngenjabulo isiphetho sabo, kuze kube yilapho owokugcina siqotho kwezifiso zawo.
Izimangaliso ukumelana ezaboniswa nokuthi izindela we Solovetsky sezindela iminyaka eyisishiyagalombili bamelana lokuvimbezela kwezinhloko zamaviyo tsarist. Lapho ka-January 22, 1676 ukuzivikela uquleke ibutho ahlasela sezindela, bahlukunyezwa futhi babulawa amadoda angaba ngamakhulu amane: umuntu walengiswa, umuntu, waquma ikhanda lakhe, umuntu ziminze imbobo. Ngokuyisimangaliso wasinda nane kuphela. Umzimba cishe ingxenye yalabo ababulawa bebengamalungu amanga zingangcwatshiwe, kuze walayela ngeke ngibalethe emhlabathini. Ngemva Isigodlo kuhlale izindela ezintsha, owamukela kwekuhlela kabusha Nikon sika. Nokho, ukucasuka yeSonto bahlolelwa hhayi kuphela emthethweni. Babengobani isikhundla esithile emphakathini?
Nakuba abaningi babo bangabantu abavamile nabapristi ayenqabe ukwamukela lolu kholo olusha, kwakungabafundi abantu eduze umculo esigodlweni sayo. Ekwindla ka-1675 ejele kusukela sokuhlushwa nendlala wafa Princess Evdokia Prokopievna Urusova futhi noblewoman uTheodosius Prokopievna Morozov nodade ayenqabe ukwamukela lolu kholo olusha. Odade kwakudingeka ukufinyelela ezigodlo, kodwa ngenxa yokholo edelelekile udumo nengcebo kanye abulawelwa ukholo.
Kwakube igagasi iphuma yonkana Russia isikhathi eside, idatha olunembile, Lutho neze, kodwa abacwaningi bathi angaphezu kwesigidi abantu abaye bafa ngenxa yokucindezelwa Nikon sika. Ngo-December 1666 uMbhishobhi Omkhulu Nikon walahlwa yicala futhi wadingiselwa Ferapontov Monastery, esikhundleni sakhe waqokwa njengoba umbhishobhi omkhulu omusha - II Ioasav, baqhubeka izinguquko esasisandulele.
emthethweni Modern. Lingobani leli qembu?
Namuhla, akukho muntu bashushiswa ngenxa nje yezinkolelo zabo. Old Amakholwa eSiberia nakwezinye izindawo eRussia aphile ngokuthula, njengoba umthetho, eceleni, ukuze isendleleni ezimisiwe zokuphila. ukuphila kwabo kusekelwe inkolo, mutual zabasebenzi unomphela. Abazami ukwenza izwe futhi ukuphendula wonke ethile okholweni lwabo. Bamane siphile lokho abacabanga ukuthi kulungile, ngaphandle ngokuphela imibono abayinikezwa ngabanye. Ngakho-ke akulula kanjalo ukuphendula imibuzo: "Ungubani lo emthethweni bangobani abashisekeli sezenkolo, namaqhawe, crazy?" Wonke umuntu unelungelo lokunquma ukuthi ngokwayo, kodwa noma kunjalo laba bantu esikhathini Nikon, futhi manje bafanelwe yinhlonipho ngokuba ngokuqinile okholweni lwabo. Futhi lokho iningi lethu anisuthi!
Barite usimende: izici ezibonakalayo. Amathiphu isicelo futhi ukukhethwa barite plasters
Zonke amathilomu ku saseNevsky Prospect (Petersburg): izithombe kanye nokubuyekeza
Surikov "Suvorov owela i-Alps": ubuqhawe amasosha aseRussia phakathi nomkhankaso waseSwitzerland